I-SP-L10M SOICARE i-400ml iinkuni eziziinkozo inkungu enkulu ye-aromatherapy whit isithethi seBluetooth esibaluleke kakhulu kwi-oyile eyi-oyile, China SP-L10M SOICARE 400ml iinkuni eziziinkozo inkungu enkulu ye-Ultrasonic Aromatherapy whit isithethi seBluetooth esibalulekileyo seoyile yabenzi beoyile, Abaxhasi, iFektri -Sunpai Industries Limited
Uthotho lwezinto zendalo
Uthotho olukhulu lomthamo
Uthotho lweSmart kunye neMisebenzi emininzi
Uthotho lwe-USB kunye neMoto
Iphunga lokuthengisa elibi
Uluhlu oluphezulu lokuzalisa
Uthotho oluthe rhoqo
I-SP-L10M SOICARE i-400ml yeenkozo zeenkuni ezinkulu ze-ultrasonic Aromatherapy whit isithethi seBluetooth
I-SOICARE i-400ml yeenkuni eziziinkozo inkungu enkulu ye-ultrasonic Aromatherapy whit isithethi seBluetooth esithutha ioyile
Isixa esincinci soMyalelo:
16 * 16 * 10cm
Iziqephu ze-10000 ngenyanga
I-ISO9001-2015, CE, RoHS
T / T, LC, PAYPAL, ALIBABA INSHORENSI, PAYONEE
· 【Ulawulo lwe-Wireless App kunye neSithethi seBluetooth】: I-Aromatherapy diffuser iyakhawuleza kwaye izinzile ukudibanisa ibluetooth yefowuni ngaphakathi kwe-13ft. Kuza kunye nesandi esiphakamileyo sesandi kunye nevolumu ephezulu yokugcwalisa ngaphakathi. Ukuseta ixesha, uLawulo lweNkungu, Isidlali-mculo, uLawulo lokuKhanya kwiapp. Isithethi sinokusetyenziswa ngokwahlukeneyo. Iyahambelana ne-Android 4.3+, i-iOS 4.0+ (Inkxaso yalo lonke uhlobo lwefowuni ngaphandle kwefowuni kaGoogle) i-iOS kufuneka ivule ibluetooth kwaye iqhagamshele isasazisi ngaphambi kokukhuphela i-'Aromalife 'APP.
· 【Amandla amakhulu angama-400ml kunye nemisebenzi emininzi】: Isithambisi sokuhambisa ivumba kunye nomsebenzi wokudibanisa, ungongeza amathontsi eoyile ebalulekileyo emanzini, emva kwemizuzwana embalwa kuya kugcwaliswa ngevumba leoyile efanelekileyo. Ukukhuselwa kwendalo kwitanki yamanzi ye-PP, kuthintela ngokufanelekileyo ukubola kweoyile efanelekileyo kunye nokuhlala ixesha elide. Esi sisasazi sevumba sinokuhlala iiyure ezili-10 ngomthamo wamanzi we-400ml. Ukwamkelwa kwetekhnoloji ye-ultrasonic, le diffuser ithule kakhulu xa isebenza.
· 【Ulawulo lokuKhanyisa】Umzimba weenkozo zomthi kunye nemaski yentyatyambo engenanto, izibane kunye nokunyuka kwenkungu kukwenza uzive ngathi uhlala usisitiya sephupha esimangalisayo. Umbala unokuhamba ngebhayisikile okanye uwusete ngombala omnye. ujongano oluyingqayizivele lokukhanya kwescreen sokujongana, ukuseta ngokulula kwi-app, uya kuyifumana imibala ukwanelisa iimfuno zakho ezahlukeneyo.
· 【I-Ultrasonic epholileyo iMist Diffuser】: ukutshiza kuthambile kwaye kuthambile, kuphucula ukhuseleko ngelixa liphucula ivumba leoyile eyimfuneko ngokwayo UkuSebenza kunye nokusasazeka ngokulinganayo. Umsebenzi oNgenaManzi oNgenamanzi, Emva kokuba amanzi ephelile, i-diffuser iya kuvala ngokuzenzekelayo. Akukho bushushu busetyenziswayo, obukhusela abantwana kunye nezilwanyana zasekhaya.
· 【Izipho ezigqibeleleyo】Ukuphumeza i-aromatherapy kunokunciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo, kuphucule umgangatho wobomi kunye nokulala. Le aromatherapy yeoyile iyimfuneko yokusasaza inenkozo enkulu yokhuni yangoku, njengesiqwenga sokuhombisa. Ulawulo losetyenziso olusebenzayo, izibane ezimibalabala. Ilungele amadoda nabafazi kumakhaya nakwiiofisi zeshishini. Kukhetho olufanelekileyo ukusebenzisa le diffuser intle njengezipho kubahlobo bakho nakwiintsapho, abathandi.
I-PP + ABS
I-Cool-Mist Impeller Humidifier
Ukucima amandla ngokuzenzekelayo xa kungekho manzi
Isithethi seBluetooth, humidifier, aromatherapy
Ubungakanani bebhokisi yemibala:
18.1 * 18.1 * 11.0cm
I-SP-G02 100ml ethandwayo ivumba leseramikhi
I-SP-G09 SOICARE 200ml i-ceramic bamboo Aromatherapy Ebaluleke kakhulu kwi-Diffuser yeoyile
I-SP-USB15 SOICARE 120ml MINI emhlophe entle ye-USB efanelekileyo yokusasaza ioyile
I-SOICARE 4L Amandla amakhulu oMandla oMoya weHypidifier
Inombolo: + 86 21 6090 1394
Ukuhamba: +86 131 1441 9443
Idilesi: I-133,218 Huting (N.) Indlela, iSithili seSongjiang, iShanghai, ngo-201615, eChina
Ilungelo lokushicilela @ 2020 I-Sunpai Industries Limited onke amalungelo agciniwe